विश्वव्यापी १०० मिलियन भन्दा धेरै मानिसहरु हेपाटाइटिस ए बाट हरेक बर्ष संक्रमित हुन्छन् : विश्व स्वास्थ्य संगठन – Sajha Pati
विश्वव्यापी १०० मिलियन भन्दा धेरै मानिसहरु हेपाटाइटिस ए बाट हरेक बर्ष संक्रमित हुन्छन् : विश्व स्वास्थ्य संगठन
हेपाटाइटिस ए को कारण के हो
हेपाटाइटिस ए कलेजोमा संक्रमणको एक प्रकार हो यो हेपाटाइटिस ए भाईरसका कारण हुन्छ । यो बिरामीमा एक व्यक्ति हल्का बिरामी वा गम्भीर बिरामी हुन सक्छ र यो केहि हप्ता देखि महिनासम्म रहन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार विश्वमा १०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरु प्रत्येक वर्ष हेपाटाइटिस ए बाट संक्रमित हुन्छन् । यद्यपि यो कलेजोको संक्रमण सामान्यतया बच्चाहरुमा सामान्य मानिन्छ तर यो बिरामीमा केहि अवस्थामा गम्भीर हुन पनि सक्छ । ठूला बच्चाहरु र वयस्कहरुमा यो संक्रमण सामान्यतया अधिक गम्भीर लक्षणहरुको कारण बन्छ । यि लक्षणहरु मध्ये एक पीलिया हो जुन ७० प्रतिशत भन्दा धेरै केसहरुमा हुन्छ । यदि यो समयमा ख्याल राखिएको छैन भने केहि अवस्थामा यो कलेजोको विफलता र केहि अवस्थामा मृत्युको रूपमा जस्तै गम्भीर परिणाम हुन सक्छ । हेपाटाइटिस ए को प्रकोप संसार भरमा हुन्छ तर प्राय जसो ठाउँहरुमा जहाँ सरसफाइको ख्याल राखिएको छैन ।
यदि तपाइँ हेपाटाइटिस ए भाइरससंग दूषित पानी खानुहुन्छ वा पिउनुहुन्छ भने तपाइँ संक्रमित बन्नुहुन्छ । यो मानिसहरु बीच एकबाट अर्कोमा फैलन्छ । यो संक्रमण प्राय मुखबाट फैलन्छ, यो तब फैलिन्छ जब कोहि दूषित पानी अथवा दुध पिउँछ वा दूषित खाना खान्छ जुन राम्रो हेरचाहसंग तयार गरीएको छैन ।
यदि गल्तीले हेपाटाइटिस ए बाट दूषित खाना खाईन्छ भने यदि संक्रमित बच्चाको डायपर परिवर्तन गरेपछि हात राम्ररी सफा गरिएन भने हेपेटाइटिस ए बाट संक्रमित हुने जोखिम हुन्छ । यदि रेस्टुरेन्टमा खाना र पान सफा शुद्धतातिर ध्यान दिएनौ भने सजिलैसंग संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ ।
यी संकेत र लक्षणहरुमा ध्यान दिनुपर्छ
जरूरी छैन कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति केहि लक्षण देखाउँछ । हेपाटाइटिस ए का लक्षणहरु विकसित हुन्छन् ती सामान्यतया संक्रमणको २ देखि ६ हप्ता भित्र देखा पर्दछ । यी लक्षण हुन : ज्वरो, उल्टी, खैरो मल, थकान, पेट दुखाइ, जोर्नी दुखाई, भूख कमै लाग्ने, वाकवाकी र पीलिया । तर हरेक संक्रमित व्यक्तिमा यी लक्षणहरु देखाउँदैनन् र केहि अवस्थामा लक्षण ६ महिनासम्म रहन सक्छ ।
हेपाटाइटिस ए बाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
हेपाटाइटिस ए संक्रमणको रोकथाम सहज छ । आफैलाई बचाउनको लागी सबैभन्दा सजिलो तरीका हो सफा पानी पिउने, खाना राम्ररी पकाउने, कच्चा मासु र घोंघा बाट बच्ने, फलफूल र तरकारी सफा पानीले धुएर प्रयोगमा ल्याउने, शौचालय प्रयोग गरेपछि साबुन र पानीले हात राम्रोसँग धुने, यो मात्र हैन आफ्नो बच्चाको नेप्पी परिवर्तन गरे पछि, खाना तयार गर्नु अघि साबुनले आफ्नो हात धुने, खाना खाईसकेपछि पनि साबुनले हात धुने, आफ्नो घरको वरपर सफाई कायम राख्ने र बच्चालाई हेपाटाइटिस ए लगाउने ।
हेपाटाइटिस ए को लागी कुनै विशेष उपचार छैन त्यसैले मात्र केहि सुरक्षा उपायहरु गरेर रोगबाट बच्न सकिन्छ । खोप लगाएर हेपाटाइटिस ए को जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
हेपाटाइटिस ए खोप कहिले दिन सकिन्छ ?
हेपाटाइटिस ए को खोप एक बर्ष वा माथिका बच्चाहरुलाई दिन सकिन्छ । डब्लूएचओ र बाल चिकित्सा एकेडेमी जस्ता ग्लोबल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अधिकारीहरु यो खोप तोकिएको उमेर सीमामा पर्ने सबै बालबालिकाहरुलाई दिइने सल्लाह दिन्छन् । हेपाटाइटिस ए र बच्चाहरुको लागी टीकाकरणको बारेमा अधिक जानकारीको लागी बाल रोग विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्ने र उनको सल्लाह बमोजिम निश्चित गर्ने ।-गुगल : ओन्लीमाईहेल्थ
जलवायु परिवर्तन : समुद्रको रौदरुप हुदै जाने छ, हरेक शताब्दीमा होइन, हरेक बर्षमा विनाशकारी घटनाहरु हुनेछन् : आईपीसीसी रिपोर्ट
महाबौद्धको १६ हाते गणेश, महाङ्काल भैरव र शनिदेव मन्दिर पुननिर्माण सम्पन्न